Home Wararka Dibada Hooyo shaqada uga tagtay si ay ubadkeyga u Naas nuujiso
Hooya 25 jir ah oo ku nool dalka Kenya ayaa shaqadeedi dib uga laabatay kaddib marki ay 3 bilood shaqadeeda uga maqneed si ay u naas nuujiso.
Xifadlayaasha caafimaadka waxay ku taliyaan in ilmaha naaska la nuujiyo 6 bilood oo xiriir ah balse hooyadan oo danyar ah waxay awoodi weyday muddadaa iney shaqada ka maqnaato.
Seddex bilood markii ay ilmaheeda naas nuujisay ayey goobteeda shaqada ku laabatay.
“Shaqada inaan ku laabto waan ku qasabanaaday maxaa yeelay ma haysto dhaqaale aan shaqada uga maarmo. Balse haddii aan awoodi laha 6 bilood maahee sanad shaqa ma aadeen,” ayey tiri Sophy Saronge.
Sophy waxay sheegtay iney dareemeyso dambiilanimo maadaamaa ay ilmaheeda sida ku habboon ay u nuujin weyday.
Dadka ku hareereysan Sophy waxay kula talinayeen iney go’aan khaldan qaadatay maadaamaa ay gabadheeda yar saameyneyso.
Wakaaladaha caafimaadka dalka Kenya waxay hooyooyinka kula talinayaan 6-da bilood ee ugu horreya in ilmaha la siiyo caanaha naaska oo keli ah.
Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO waxay sheegtay ilmaha oo 6 bilood oo ugu horreeya caanaha naaska oo keli ah la siiyo ay ilmaha siineyso awoodda difaaca jirka ilmaha inuu sare u kaco cudurradana uu iska difaaco. “Waana tallaalka ugu horreeya uguna wanaagsan oo cudurrada carruurnimada ilmaha ku haleelo looga hortago.”
Inta badan hooyooyinka ku nool dalka Kenya ilmahooda si wanaagsan ayey u naas nuujiyaan inkasta oo 60% hooyooyinka duruufo haysto awgood ay ilmaha nuujinin wax ka badan 6 bilood.
“Gabadheyda waxaan siiyaa caanaha lo’da aniga oo og iney caanahaasi wax badan u tareyn jirkeedana si wanaagsan ula fal galeyn,” ayey tiri Saronge.
“Habka ugu wanaagsan ee hooyada iyo ilmahaba waxtarka u leh wuxuu yahay iney hooyada hesho 6 bilood oo fasax ah mushaarkeedana la siinayo si ilmuhuna uu u helo 6 bilood oo naas nuujin xiriir ah,” ayey tiri
Ruth Mumbi oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka waxay sheegtay dowladdu iney daryeelin arrimaha dumarka oo loo baaahnaa in la kordhiyo fasaxa xilliga dhalmada oo hooyada umuleyso la siiyo si ay wakhti ku filan ugu hesho naas nuujinta ilmaheeda.
BBC waxay la xiriirtay wasaaradda shaqada si ay uga jawaabto eedda dowladda loo soo jeedinayo.
Waaxda cafimaadka ee wasaaraddana waxay sheegtay fasaxa seddexda bilood ee dumarka la siiyo iyaga oo mushaar qaadanaya xilliga ay dhalayaan uu yahay billow wanaagsan oo bogaadin mudan. Inkasta oo dowladda ay qorsheyneyn fasaxaasi iney dheereyso ilaa wax lagabaddalo sharciga shaqaalaha dalka Kenya u yaalla.
Dadka wax falanqeeya waxay si weynu dhaliilaan madaxweyne Uhuru Kenyata inuu ku guul darreystay inuu saxiixo sharci uu baarlamanka 2016-kii meel mariyey oo dhigayey iney shirkadaha iyo xafiisyada ay diyaariyaan goob looga tala galay iney ilmahooda ku naas nuujiyan. 2019-kina markale ayaa dib u eegis lagu sameeyey hase yeeshee weli lama meel marin.
Dalka Nambia ayaa ka mid ah waddamada Africa ee Tusaala wanaagsan loo soo qaadan karo oo hooyooyinka xilliga ay umulaan siiya fasax dheer oo ay ilmaha ku naas nuujiyaan dhiiirragelin ahaan u siiyo ilaa $20- $1,000 doolar.
“Caanaha naaska waxay kordhiyaan caqliga iyo maskaxda ilmaha iyo fahamka dabme ee waxbarashadaba,” ayey tiri Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO.
Cilmi baaris naas nuujinta lagu sameeyey
Caana naaska faa’idada ay ilmaha u leeyihiin ka sokoow waxay waxtar weyn u leedahay hooyada nuujineysa lafteeda, sida ay sheegtay cilm-baaris cusub oo la sameeyey.
Cilmi-baadhis cusub ayaa daahfurtay in dumarka naaska nuujiya ay aad ugu yar yihiin inay ku dhacaan cudurrada wadnaha, dhiig-furanka, ama ay u dhintaan cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga, marka loo eego haweenka aan samaynin
Saynis yahano ku sugan Austria – oo eegay xogta in ka badan hal milyan oo hooyooyin ah – ayaa sheegay in naasnuujinta laba iyo toban bilood ama ka badan ay yarayso khatarta ah in ay ku dhacaan cudurradan.
Cilmi-baadhayaashu waxay sheegeen in daraasadihii hore ay ahaayeen kuwo aan waafaqsanayn xidhiidhka ka dhexeeya muddada kala duwan ee naas-nuujinta iyo khatarta cudurada wadnaha. Naasnuujinta sidoo kale waxaa lala xiriiriyay faa’iidooyinka kale ee caafimaadka hooyada, oo ay ku jiraan khatarta hoose ee sonkorowga, kansarka ugxan-sidaha iyo kansarka naasaha.
Previous articleGolaha Wadatashiga Qaranka oo warbixin ka dhageystay Ergeyga Gurmadka Abaaraha
Next articleWadadda keliya ee waddan laggu badbaaddin karro waa in dadka loo-kalla qaaddaa xaqa iyo cadaladda.
Koox Ingariis ah oo dooneysa inay afduubato xiddig bartilmaameed u ah...
(DAAWO SAWIRADA) Ra’iisul Wasaare Xamse oo xilka kala Wareegay Ra’iisul Wasaarihii...